NKWỌ – hoo!haa!!
Taa bụ Ahịa Nkwọ; Nkwọ Ogbede, Otu Nkwọ Ọnịcha, Nkwọ Nnewi, Nkwọ Owelli, w.d.g. Onye ga-agara anyị ahịa Nkwọ taa? O ruo nu n’omume. Chetakwa na uru dịkwa yaoooo! Uru Puku Naịra Atọ. N3K
Previous Post: NTỊ
Next Post: Ndi Fulani na-achị ehi awakpola ndi Adamawa
Umu Igbo ndewo nu. Ta bụ ahia nkwọ. Nkwọ otulu, Nkwọ ngwa, Nkwọ nike, nkwọ ogwu mbaise, umuevu ọnicha mbaise nwe m! biko nu kedu ndi nwere mmasi ha bia sonyere m ka anyi rue na ọdọ ndi diochi na nkwọ umụevu ka m zuta ezigbo mmanyi ngwọ ọtụtụ iji guhee ọnụ, ma zuta kwa ugba, okporoko, na mkpụrụ aṅara maka ọgakọ ime ọbi nke uhụru chi tụpu efobe akụkọ ifọ
Ka anyi ga Otu Nkwo Onicha nke di na Okpuru ochichi Onicha South. Ahia so na ahia kacha Ukwuu na panyara Westi Afrika. Ka anyi ga zuta Akwà Ekeresimesi .I bia n’otu nkwo Onicha i ga enweta udiri Akwà di iche iche dika Akwà Umuaka, nke umu nwanyi na nke umu nwoke ma nwetekwa ya n’onu ala. Ana erekwa ihe ekike di iche iche na ya bu ahia. Obodo ndi gbara Onicha gburu gburu gunyere Obosi, Umunya, Nkpor, Nsugbe, Asaba nakwa Odekpe
Ehee! Tata bu ahia eke, eke Awka, eke Ekwulobia, eke Abagana wdgz. Bikonu eke anyi ga-azu tata bu eke Abagana.Abagana di n’okpuru ochichi Njikoka na Anambra steeti. Otutu ndi mmadu si mpaghara di iche iche dika Awka, Amawbia, Enugwu-ukwu, Nimo, umunnachi,ifitedunu wdgz abia ahia. Enwe kwara odu di iche iche n’ime ahia dika odu ji , anu, azu, ogili na ede, Akwa wdgz.